Tacsi ku socota reer Gurey Cali Carab.
Thursday July 09, 2020 - 15:33:15 in Maqaallo by Wariye Tiriko
Aniga oo ku hadlaya afka reer Tarabi Oogle, waxaan tacsi tiiraanyo leh u dirayaa Qoyska iyo Qaraabadii ay ka baxday Hooyo, Ayeeyo iyo Macooyo Canab Cali Cawl.
waxaan si gaar ah ugu tacsiyadaynayaa Jaamac, Cali iyo Faadumo oo ay hooyo u ahayd, Ilma Aadan Tarabi Oogle oo ay ayeeyo u ahayd iyo caruurta ay macooyada u tahay ee ku filiqsan miyi, magaalo iyo daafaha caalamka.
Waxay ahayd qof dhowrsoon, dhaqan wanaagsan oo aad loo jeclaa, Eebe waxaan uga baryayaa in uu janadii ka waraabiyo, qoyska ay ka baxday iyo qaraabadana samir iyo iimaan ka siiyo, aamiin. Innaa lillaahi waa innaa ilayhi raajicuun.
Bashiir Tarabi Oogle,